နောက်လိုက်နံပါတ်များသည်အမှန်ပင်ရေတွက်ပါသလား။ | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 25, 2010 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်စာရင်းပေးသူ ၁၀၀ သို့မဟုတ် ၁၀,၀၀၀ ကိုအွန်လိုင်းမှာထည့်နိုင်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်၏အောက်ဆုံးလိုင်းအတွက်ထူးခြားမည်မဟုတ်ပါ။ ငါဆွဲဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် မှန်သော စာရင်းပေးသွင်းထားသူများသည်အမှန်တကယ်၎င်းတို့ထံမှစီးပွားရေးရရန်ဖြစ်သည်။ ငါပင်ကြောင်းအတိတ်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်မျက်လုံးများအကြောင်းမဟုတ်ပါကရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းပါ။
သင်၌စုစုပေါင်းနောက်လိုက် (သို့) စာရင်းသွင်းသူမည်မျှရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်ဂရုမစိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များဖြစ်နိုင်သည့်နောက်လိုက်များ (သို့) စာရင်းသွင်းသူအရေအတွက်ကိုဂရုမစိုက်ပါ။ အကယ်၍ သင်၏ကွန်ယက်သို့ကြော်ငြာနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုကမ်းလှမ်းပါကနံပါတ်ရှိလျှင်ကျွန်ုပ်လုပ်လိမ့်မည် သက်ဆိုင်ရာနောက်လိုက်သို့မဟုတ်စာရင်းပေးသွင်းထားသူ ငါ့စီးပွားရေးအတွက်မှန်ကန်သည် - မင်းမှာကြီးမားတဲ့ကွန်ယက်တစ်ခုတည်းကြောင့်ပဲ။
တစ်ခုအားသာချက်ရှိပါတယ် နံပါတ်များကြီးများသော်လည်း။ ဒါဟာမြှင့်တင်ရေးနှင့်အခွင့်အာဏာပါပဲ။
နံပါတ်များအတွက်အရှိန်အဟုန်ရှိပါသည်။ အနိမ့်နောက်လိုက်အရေအတွက်နိမ့်နောက်လိုက်မွေးစားစေပါ။ စကြ ၀ inာတွင်အကောင်းဆုံးဘလော့ဂ်၊ twitter အကောင့်သို့မဟုတ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်၌မရှိသည့်အခါနောက်လိုက်များကိုထည့်ရန်ခက်ခဲသည်။ သင့်တွင်နောက်လိုက် ၁၀၀ ရှိပါကအကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာနှင့်ပင် ၂၀၀ သို့ရရန်ရက်သတ္တပတ်များသို့မဟုတ်လပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်။
နှင့် 10,000 နောက်လိုက်တစ်ရက်လျှင် ၁၀၀ ထပ်ပေါင်းနိုင်သည်။ အကြောင်းရင်းနှစ်ရပ်ရှိသည်။
နံပါတ်ကြီးတွေကမင်းဟာကြီးမားတဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုတယ်။ ငါကရယ်စရာကောင်းတဲ့အသံဖြစ်နေတယ်ဒါပေမယ့်သိတယ်။ လူတွေကပျင်းနေတယ်။ သူတို့ကသင်၏ Twitter စာမျက်နှာ၊ သင်၏ Facebook စာမျက်နှာသို့မဟုတ်သင့်ဘလော့ဂ်ကိုကြည့်ပြီးသင်မည်မျှကြီးမားသောသဘောတူညီချက်ကိုရှာရန်ကြိုးစားကြသည်။ သင့်မှာနံပါတ်များကြီးကြီးမားမားရှိရင်သူတို့ကအောက်ပါခလုတ်ကိုပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူနှိပ်တတ်ကြတယ်။ ဒါဟာကံဆိုးတဲ့အချက်ပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ sidebar မှာအဆင့်သတ်မှတ်တဲ့အမှတ်အသားများစွာကိုပြတာကြောင့်ပါ။
နံပါတ်ကြီးများကသင့်အားမြှင့်တင်ရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘလော့ဂ်အဖြစ်ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ငါပြောက်ကျားစျေးကွက်၏တစ်တန်လုပ်ခဲ့တယ်နေရာတိုင်းကမြှင့်တင်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်၏စာဖတ်ပရိသတ်သိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ငါထို့နောက်ငါကဘယ်လိုပြုခဲ့ပုံအကြောင်း post ကိုရေးသားခဲ့သည်။
အခြားဘလော့ဂါတွေလည်းအဲဒီလိုလုပ်ကြတာကိုငါကြည့်ခဲ့တယ်။ Feedburner ၏စာရင်းပေးသွင်းသူအရေအတွက်ကိုသင် hack နိုင်သည့်အချိန်တွင်အလွန်သြဇာညောင်းသောဘလော့ဂါများသည်အပြည့်အဝအသုံးချပြီးယင်းကိုလုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်တွေကလူကြိုက်များလာတယ်။ မယုံနိုင်စရာပဲ။ လှည့်စားတာကိုကျွန်တော်တွန့်ဆုတ်နေခဲ့ပါပြီ။
ငါနောက်လိုက်လိမ်လည်လှည့်သို့မဟုတ်ဝယ်ယူထောက်ခံ? ဒါကသင့်အတွက်ပါပဲ ငါတကယ်မကောင်းဘူး၊ မကောင်းဘူးဆိုတာငါမပြောဘူး။ ငါပြောတာကဒါကတကယ်ပဲအလုပ်လုပ်တယ်၊
ငါလက်ရှိမြှင့်တင်နေပါတယ် ငါ့ Twitter အကောင့် Featured Users များနှင့်နောက်လိုက်ရာပေါင်းများစွာကိုပေါင်းထည့်ပြီးပါပြီ။ ၎င်းသည်ခွင့်ပြုချက်ရရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုကောင်း ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်သည်နောက်လိုက်များကိုလိမ်လည်လှည့်စားခြင်းသို့မဟုတ် ၀ ယ်ခြင်းမပြုပါ။ ကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက်ကနောက်လိုက် ၁၀၀၀၀ ကျော်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရဖို့ပါ။
အသားပေးသုံးစွဲသူများအပေါ်မှတ်စုတစ်ခု။ ကျွန်တော်ကြီးအတွက်ငွေမပေးဘူး တစ်ခါဝယ်ပါ အနာဂတ်မှာအထုပ်။ ကျွန်ုပ်၏မွေးစားခြင်းသည်ကင်ပိန်းအစောပိုင်းတွင်တဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ ကျဆင်းသွားခဲ့သည် - ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာကိုထပ်တူထပ်တူသူများထံမှအစာကျွေးနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ငါကသူတို့ပထဝီဝင်အနေအထားအရကတည်းကငါ့တည်နေရာကိုပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာငါကအနည်းဆုံးကြော်ငြာပမာဏကိုဝယ်ပြီးသူတို့နှင့်အတူစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်ထင်သည် လစဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်း.
နောက်လိုက်တစ်သောင်းသည်မြှင့်တင်ရန်အတွက်အလွန်ကောင်းသောအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ငါသြဂုတ်လမှာထွက်လာမယ့်စာအုပ်တစ်အုပ် (Dummies အတွက် Corporate Blogging) ရေးသားနေတဲ့အတွက်ကျွန်မရဲ့ Facebook နံပါတ်တွေ၊ Facebook၊ Twitter နဲ့ feed feed တွေကိုဖြတ်သန်းချင်တယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ယက်အတွင်းမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ယက်သည် ပို၍ ကြီးမားပြီးကျွန်ုပ်နှင့်လူများပိုမိုထိတွေ့နိုင်သည်။
ဒီတော့ ... ဟုတ်တယ်၊ ငါကဂဏန်းကြီးတွေကိုရေတွက်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်
မတ်လ 26, 2010 မှာ 10: 58 AM
သင်တို့နှင့်အတူငါသဘောတူသည်၊ နံပါတ်များကြီးများရေတွက်သည်၊ သို့သော်သင်၏ဆိုဒ်သို့စီးဆင်းနေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမူထင်ဟပ်ခြင်းမရှိပေ။ ကြီးမားသောနံပါတ်များသည်အရည်အချင်းပြည့်မီသောခေါင်းဆောင်များနှင့်ထိတွေ့ရန်ကူညီသည်၊ ထိုအခါသင်သည်အရေးယူရန်ရှိသည်။ တကယ်တော့၊ အကြံဥာဏ်အနေနဲ့သင့်ရဲ့ Facebook fan စာမျက်နှာပေါ်ရှိစာရင်းများ၏အားသာချက်ကိုယူရန်သင့်အားအကြံပေးလိမ့်မည်။ ပရိသတ်တွေကိုစာရင်းအဖြစ်ခွဲပါ
သင်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါကသင်ဤဆိုဒ်သို့ဝင်ရောက်နိုင်သည် http://bit.ly/azEurc သင်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုနေရာချပြီးပညာရှင်များထံမှအမြန်အဖြေများရယူပါ။